उपत्यकाका सिडिओको बैठक बस्दै : निषेधाज्ञा अझ खुकुलो पार्ने तयारी ! - Kantipath.com
उपत्यकाका सिडिओको बैठक बस्दै : निषेधाज्ञा अझ खुकुलो पार्ने तयारी !
उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप गर्दा निजी सवारी साधनलाई सञ्चालन गर्न दिने प्रशासनले तयारी गरेको छ । जोर–विजोर प्रणालीमा चल्न दिने वा अरु नियम लगाउने भन्ने निर्णय भएको छैन । स्रोतका अनुसार काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका संकट व्यवस्थापन समिति (डीसीसीएमसी) ले पनि निजी सवारीसाधनलाई चल्न दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
डीसीसीएमसीले खाद्यान्न पसलहरु पनि ४ बजेसम्म खोल्न सुझाव दिएको छ । अन्य व्यवसायलाई पनि बारअनुसार सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने भनिएको छ । तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)हरुले गृह मन्त्रालय र कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमस) सँग पनि परामर्श गरेर निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउने मोडालिटीको अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन ।
काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका तीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले लगाएको निषेधाज्ञा सोमबारबाट सकिँदैछ । त्यसैले निषेधाज्ञा थपको निर्णय गर्न आइतबार साँझ ५ बजे प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठक बस्दैछ । निषेधाज्ञा अन्तको घोषणा नभइहाल्ने तर खुकुलो गर्दै लगिने योजना बनेको छ । बैठकले अहिलेसम्मको समिक्षा गरी सवारी सञ्चालनमा खुकुलो गर्न लागेको बुझिएको छ ।
अब निषेधाज्ञाको मोडालिटी परिवर्तन हुने क्रममा सवारीमा जोर बिजोर प्रणाली लागू हुने भएको छ । निजी सवारी जोर बिजोरमा सञ्चालन गर्न दिने तयारी भएको छ । सार्वजनिक सवारी साधन भने अझै सञ्चालनमा आउने छैन । एक हप्ताको अवस्था हेरेर कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई दृष्टिगत गरी सार्वजनिक सवारी साधन आधा सिटमा चलाउन दिने तयारी समेत भएको छ । १६ वैशाखबाट जारी निषेधाज्ञा दुई महिना हुन लागेको छ । असारबाट भने केही खुकुलो पारिएको छ ।
Previous Previous post: सञ्चारकर्मी रुपालाई काेठा नदिने घरबेटी तीन दिन हिरासतमा
Next Next post: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
खड्गप्रसादले १ वर्षमा तुइन विस्थापित गर्ने हावादारी गफ दिँदा महाकाली घटना भयो : सांसद नेपाली
वर्षेनी बढ्दो प्राकृतिक विपत्ति, विपदबाट कुन वर्ष, कति क्षति ? यस्ताे छ विवरण
नेपालकी छाेरी हेवन उपाध्याय “खामोसी उईथ लाईफ” कार्यक्रममा प्रथम
मध्यरातमा अस्पतालबाट फोन चोरी : भिडियो र नम्बर पाउँदा समेत प्रहरी मौन
भेरी अस्पताल आक्रमण : कालो दिनको घोषणा गर्दै कालोपट्टी बाँधेर काम गर्न आग्रह (विज्ञप्तीसहित)
घरधनी सरस्वती प्रधानले दिइन् सञ्चारकर्मी रुपा सुनारविरुद्ध आयोगमा उजुरी
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा यो वर्ष ८ सय नेपालीको मृत्यु
विप्लव समूहको बन्दको आंशिक प्रभाव, पाल्पामा बम विस्फोट